Lower Baakens Zipline Project – Xhosa – MBDA Surveys
IMBDA iyakumema ukuba uthathe inxaxheba kolu vavanyo lwezimvo lufutshane ngenjongo zokuqokelela imibono nezimvo zabo babandakanyekayo kuPhando lweLifa lweMveli yeFort Frederick kwakunye nezo zakhiwo zingqamene ne-erf 3596, eCentral, eBhayi. Esi sicelo sinxulumene nokuphakanyiswa kokwakhiwa kweZip Line ekwesi siza singentla. Olu vayanyo lwezimvo luza kuqinisekisa ukuba abo babandakanyekayo banikwa ithuba lokuvakalisa izimvo zabo, nezizakuthi zidityaniswe njengenxalenye yengeniso yokugqibela.
I-Arhante yezoPhuliso eMandela Bay neyaziwa njengeMandela Bay Development Agency (MBDA) igunyanziswe ukuba isebenzise ubuchule bayo ekuzalisekisweni kothotho lwee-projekthi ezikummandla weBaakens River. Ngonyaka ka2014, i-MBDA igunyazise iplani yokuphuhliswa ngokutsha kwalo mmandla. Uhlaza olutyebileyo, olwakhiweyo, kunye namafa enkcubeko kulo mmandla obiyelweyo, lunikezela ngethuba elihle lokuphuhlisa ukhenketho nolonwabo lokuziphumlela njengemveliso enokuthi ixhase ukhenketho olunikezelwa sesi sixeko.
Ngonyaka ka2019, okulindelekileyo ngokusekwa kwe-Zipline kummandla weBaakens Valley kuye kwahlolwa ngezifundo zoPhando loko Kunokwezeka kwakunye nePlani yoshishino. Ziliqela iindlela ezithe zalungiselelwa ukuchongwa, kodwa ngenxa yeZithintelo eziNqandayo (ezifana, nokunqandwa bubume bemeko yendawo), indlela yokugqibela ikhethwe phakathi kweendibano-malungu ezimbini nezisebenzayo, iFort Frederick kunye ne-Lower Baakens Valley; zombini ezi ziza, kwakunye neendawo ezizingqongileyo, zizakuba yinxalenye yophuhliso olubanzi.
Kuziinjongo zethu njengenxenye yale projekthi ukunyusa nokukhulisa uthando lobuhle bobume bemeko yendawo, ngakumbi ukujongana nemiceli-mingeni ekhoyo, efana nokucoca, ukugcinwa kwendawo ngobunono, kwakunye nokhuseleko lwayo. Siyibona le Zipline njengendawo eyodwa, ejongene noluvo olulodwa lolonwabo lwabancinane nabadala, abalapha ekhaya nabatyeleli, neyakuthi inike umdla nentsebenziswano phakathi kwezinto ezinobungozi kunye nobuhle bendalo kwimbonakalo yelizwe.
Kuphela – Heritage Report to Stakeholders
Isini	Indoda	Umfazi
1.) Wakhe watyelela kwisiza saseFort Frederick? *
2.) Uyayazi ukubaluleka kwembali yesisiza? *
3.) Uyakholelwa ukuba sisiza esibalulekileyo apha eNelson Mandela Bay? *
Ukuba uthi ewe, sicela ucacise
4.) Ingaba uziva ukhuselekile xa utyelela kwesisiza? *
5.) Ungaba nomdla wokuthatha inxaxheba kwamava enkcubeko afana nezipline? *
6.) Ungavuma ukuba ubhatale imali-yongeno nxa uteyelela emonument, izipline okanye ezinye izenzo eziqulunqwe kwesi sakhiwo? *
7.) Ndiyayixhasa/Andiyixhasi injongo yokuba kwenziwe izipline njengendlela yokungenisa imali enxulumene nalemonument. (Sicela ucacise impendulo yakho.) *
Sicela ucacise impendulo yakho
8.) Ingaba iFort Frederick sesona siza ungathanda ukuba kwakhiwe kuso izipline? *
Ukuba uthi hayi, sicela ucacise kwaye usixelele ukuba zeziphi ezinye indawo ongathanda ukuba yakhiwe kuzo?
9.) Ungathanda ukuba izipline idityaniswe nesezikho okanye ezintsha iimveliso ukuze kuphucuke amava akho? E.g. Kongezwe izenzo zodelo-ngozi, iivawutsha zokutya eretsyu, iindlela zelifa lemveli, ukhenketho lwemiveliso zobugcisa, ukuhamba ngenqanawa njalo, njalo. *
Ukuba uthi ewe, sicela udwelise ezinye izenzo obawela ziqwalaselwe?
10.) Imibono nezimvo ngokubanzi